Unyaka wesithathu olandelanayo lapho ukungcola kuhlala kuzinzile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Unyaka wesithathu olandelanayo lapho ukukhishwa komhlaba kuhlala kuzinzile
Ukukhishwa kwe-CO2 kubalulekile ekwandiseni umphumela wokushisa okushisayo kanye nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Ngokwesifundo esethulwe namhlanje ku- ingqungquthela yesimo sezulu iMarrakech (COP22) eyenziwa ngabaphenyi bephrojekthi Iphrojekthi Yomhlaba Wonke weCarbon, Ukukhishwa kwe-CO2 kuhlala kuzinzile unyaka wesithathu olandelanayo
Ngenxa yentuthuko yezimboni, ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kukhuphukile, kufaka phakathi i-CO2 kakhulu. I-CO2 igcina ukushisa yingakho yandisa amazinga okushisa aphakathi komhlaba. Ucwaningo lwenziwe lwaqinisekisa ukuthi kungenxa yokuthi ukunciphisa ukukhishwa kweChina iqiniso lokuthi sebeneminyaka emithathu bezinzile.
Ukukhishwa kwe-Global CO2 kukhule kuphela 0,2% maqondana neminye iminyaka. Sekungunyaka wesithathu umhlaba ungakaze ubhekane nokwanda okuphawuleka kangaka kokukhishwa kwesisi. Phakathi neshumi leminyaka lokuqala lekhulu lama-2, ukukhishwa kwe-CO3 kukhuphuke ngo-XNUMX% njalo ngonyaka.
UGlen peters Ungomunye wososayensi abake bahola iphrojekthi yokukhishwa kwe-CO2 emkhathini futhi wathi sibhekene nesimo lapho ukwanda kokukhishwa kugcine kunciphile ekuthuthukisweni komnotho. Kusesekuseni kakhulu ukuqinisekisa lesi sikhundla ngoba ukukhishwa komhlaba wonke, yize kuzinzile, kusengaphezulu kakhulu komkhawulo odingekayo ukunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Kusukela ekuguqulweni kwezimboni, ukukhishwa kwekhabhoni kuye kwaxhunyaniswa nokukhula komnotho. Amazwe asathuthuka awakhiphi isikhutha esiningi emkhathini. Lo mkhuba wokuxhumanisa ukungcola nokukhula komnotho kufanele ususwe ukuze kuliwe nokuguquka kwesimo sezulu.
Ngokusho kukaPeters, ukuzinza kokukhishwa komhlaba kubangelwa ukuwa kwabo eChina kusukela ngonyaka wezi-2012 ngenxa yokukhula komnotho okuphansi futhi ukusetshenziswa kwamalahle okuphansi. Izwekazi lase-Asia limele cishe Ama-30% wokukhishwa kwe-CO2 emhlabeni jikelele ngakho-ke ukwanda noma ukwehla kwayo ekusetshenzisweni kwamalahle kuyisici esinqumayo ebhalansini lokukhishwa komhlaba.
Kuhloswe futhi kulindelwe ukuthi nge Isivumelwano saseParis, kakhulu I-USA ithanda iChina ukunciphisa ukukhishwa komhlaba ngokunciphisa ukusetshenziswa kwamalahle nokukhuthaza amandla avuselelekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Unyaka wesithathu olandelanayo lapho ukukhishwa komhlaba kuhlala kuzinzile
Ukuthuthela Isimo Sezulu MANJE: ezemidlalo njengempi yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu